सरस्वती चौधरी नेपालकै सबैभन्दा अग्ली महिला, १२ बर्षको उमेरमा घर छोडेर भलिबल सिकेकी चौधरीको कथा…! – Gorkhali Dainik
October 5, 2020 366
उहाँले मलाई भलिबल खेलाउने कुरा गर्दा गणतान्त्रिक भलिबल सुरु हुन एक हप्ता मात्रै बाँकी थियो । अन्ततः म तयार भएँ । तीन-चार दिनमा जे-जति सकिन्छ सिकें । तर, अझै पनि भित्रैदेखि रुची जागेको थिएन ।
विष्णु दाइले बाबाआमासँग कुरा गरेपछि बाबाले पनि जाउ न त भन्नुभएरै अलि अलि रहर पनि हुन थालेको थियो । बाबाले जाउ भनेपछि नै राम्रै कुरा रहेछ भनेर सोचेकी थिएँ ।
हामी भलिबल प्रतियोगिताका लागि काठमाडौं आयौं । अरु जे भए पनि काठमाडौं आउन पाउँदा खुशी भएँ ।म प्लेइङ सेटमा त थिइनँ, तर पनि अन्तिम खेलमा पश्चिमाञ्चलविरुद्ध हामीले हार्ने जस्तो अवस्थामा कोचले मलाई खेलाउनुभयो । अन्तिम सेटमा हामीले हार्नका लागि दुई अंक मात्रै बाँकी थियो ।
Prevप्रदेश ५ ….: प्रदेशभामा कुर्सी तोडफोड र नाराबाजी…!
Next‘जिरो फिगर’ बनाउन खोज्दा……२३ वर्षे युवतीको यो अवस्था….भयो…!